धेरैजसो देशमा जब मानिसहरूले जीवन बीमाको पेशा रोज्छन् तिनीहरुलाई आफ्नो आम्दानीको बारेमा जानकारी हुनैपर्छ । यो पेशाबाट कति कमाउने हो त्यसको आंकलन र लक्ष्य आफैंले तय गर्ने हो । साथमा आफ्नो बिमा व्यवसाय गर्न पाउने इजाजतपत्र खारेज हुनबाट जोगिन कति बिजनेस गर्नुपर्छ भन्‍ने पनि थाहा हुनुपर्दछ । यद्यपि यो प्रसङ्ग हाम्रो देशमा ठ्याक्कै लागू हुँदैन । तर पनि तपाईको बीमा व्यवसाय सुरु गर्ने निर्णय यस कुरामा मात्र भने निर्भर हुँदैन ।
नेपालमा औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा जीवन बीमाको अभिकर्ता इजाजतपत्रलाई खारेजीबाट जोगाउन थोरै बिमालेखहरू मात्र बिक्री गरे पनि पुग्छ । तर न्यूनतम बिमालेखहरु मात्र बिक्री गरेर अभिकर्ताले पर्याप्त कमाउन भने सक्दैन । जीवन बीमाको व्यवसायलाई कायम राख्‍न आवश्यक वार्षिक र मासिक व्यवसायको न्यूनतम मूल्यलाई न्यूनतम व्यापार ग्यारेन्टी भनिन्छ । तपाईले पर्याप्त कमाईको लागि ठूलो लक्ष्य भने बनाउनु पर्छ । जति ठूलो लक्ष्य लिनुहुन्छ त्यति नै धेरै सफलता र कमाई पनि बढ्छ ।
कुनै पनि पेशामा आबद्ध हुनुअघि त्यसबाट हुने आयको अपेक्षित स्तर अनुमान गर्नुपर्छ । मानौं, तपाईं रोजगारीको लागी कहीँ अन्तर्वार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईंलाई कतिसम्मको तलब चाहिन्छ ? भनेर सोधिन्छ । यदि तपाईं थोरै तलबबाट सन्तुष्‍ट हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई अधिक तलब दिने प्रस्ताव राख्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । यदि तपाई धेरै तलब चाहनुहुन्छ भने तपाईले कडा मेहनत गर्नुपर्दछ भन्‍ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्दछ । त्यसैगरी तपाईलाई आवश्यक आम्दानी गर्न कति समय लाग्छ भनेर पनि सचेत हुनुपर्दछ ।
एक महिनामा ५० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्ति मासिक तीन देखि चार हजार को अतिरिक्त आयको लागि जानु हुँदैन । तपाईंको आयका अपेक्षाहरू तपाईंको वर्तमान मापदण्डको अनुरूप हुनुपर्दछ । यदि तपाईं पूर्ण समय काम गरेर पच्चीस हजार रुपैयाँ कमाउँदै हुनुहुन्छ भने कसरी तपाईं पार्टटाइम अभिकर्ता बाट समान पैसा कमाउने बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ ? जबकि दिनमा ८ देखि १० घण्टा काम गर्दा त तपाईंले यति कमाउनुहुन्न भने आंशिक समय काम गरेर कसरी समान आम्दानीको आशा गर्न सक्नुहुन्छ ? यस्तो अवस्थामा मासिक दश हजार रुपैयाँ आर्जन हुने पार्ट टाइम पेशा भने उत्तम हुन्छ ।
एक पटक तपाईंको पार्टटाइम अभिकर्ताबापत हुने आम्दानी १० हजारमा पुगेपछि तपाईंले पुनःआंकलन गर्नुपर्दछ, यदि दिनको दुई घण्टाले तपाईंलाई यति पैसा दिन सक्दछ भने, यसमा तपाईले पूरा समय दिएमा तपाईंको कमाई २० हजार भन्दा धेरै हुन सक्छ ।
बीमासँग सम्बन्धित पेशा गर्दा विभिन्न बाधा एवम् अवरोधहरू आउन सक्छन् जस्तै सम्भाव्यताको अस्वीकृतिलाई विभिन्न शब्द र तरिकामा सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, समयको सुविधा र बैठकको ठाउँ केवल ग्राहकले डिकोड गर्ने , एक पूर्व निर्धारित भेटमा समेत एक घण्टा कुर्नुपर्ने आदि । तपाईंले किन यी सबै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ ?
यदि तपाईं ती सबै कार्यहरु सानो आयको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । सामान्यतया, महिनाको १०–१२ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने नोकरी पाउन खासै गाह्रो हुँदैन । र ती कामहश्र अफिसमा राम्रोसँग बसेरै गर्न सकिन्छ। त्यस्तो हुने भएपछि चर्को घाम, वर्षा, र जाडो चिसोमा किन हिँड्नु भन्‍ने प्रश्‍न पनि उब्जिन सक्छ ।
यी सबै कुराहरुको निष्कर्ष यो हो कि तपाईं केवल उच्च आयको आशासहित बीमा व्यवसायतर्फ लाग्‍नुपर्छ । थोरै आयको लागि भने यति धेरै समस्याहरूको सामना गर्दै दोडिनुको कुनै औचित्य हुने छैन ।
विश्‍वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै कमाउने बीमा अभिकर्ताहरु नै हुन् । कमाइकै कारण आफ्नै निजी विमान खरीद गरेर राख्‍न सक्ने हैसियत भएका बीमा अभिकर्ताहरु पनि कैयन् छन् । विश्‍वमा धेरै यस्ता मानिस छन् जसलाई हामीले सफल उद्यमी, सफल अभिनेता,सफल राजनितिज्ञको रुपमा मात्र चिनेका छौं । तर, उनको विगत हेर्यौं भने कुनै समय ती ब्यक्ति बिमा अभिकर्ता थिए । विलगेट्स, अभिषेक बच्चन यसका उदाहरण ह’न् ।
हाम्रै देशमा पनि उच्च आय भएका धेरै अभिकर्ताहरू छन् । जो हरेक बर्ष विदेश भ्रमण गर्नसक्ने हैसियत राख्छन् । नेपालका केही अभिकर्ता यस्ता छन् की तिनीहरुसँग साधारण शैक्षिक योग्यता भएर पनि जीवन बीमाबाट वार्षिक एक करोड रूपैयाँ सम्मको आम्दानी गर्ने गर्दछन् ।
बीमा अभिकर्ताको आय थोरै हुन्छ भनेर सोच्‍नु मात्र पनि अपराध हुनेछ । किनभने कतिपय अभिकर्ताले आफ्नो परिवार मात्रै होईन समाज र राष्ट्रलाई ठुलो आर्थिक योगदान दिएका छन् । त्यसकारण यो पेशा भनेको उच्च आयको लक्ष्य राख्‍ने मानिसहरुकै लागि हो ।